About denderedzwa rechiedza
Hard Kamudzira Checkweigher
Piritsi & Kamudzira Checkweigher
Kamudzira zvakabudiswa Machine
Piritsi zvakabudiswa Machine
Kutarisana Inspection Machine
Kufambira / makorari Machine
Semi-otomatiki Vacuum Decapsulator
Otomatiki Vacuum Decapsulator
Kamudzira Checkweigher CMC-800
Kamudzira Checkweigher CMC-1200
Deblistering Machine nezvimwewo-120AL
Deblistering Machine nezvimwewo-120A
Deblistering Machine nezvimwewo-60N
Deblistering Machine nezvimwewo-60A
Kamudzira Checkweigher CMC-1600
Ichi Vacuum decapsulator inowanika vose kadikidiki capsules, hapana kuchinja zvikamu zvinodiwa.
• Kwakachena upfu Anonunura, hapana nokupwanya anoshongwa.
• Anenge 100% Kamudzira zvazvingava rakashama.
• Chengetedza nguva uye dongo.
• Itirai kanganisika capsules mukuru nokukurumidza.
• Nokuti zvachose hapana zvakaipa simba / pellets / mapiritsi mukati Kamudzira.
• kushanda chero kadikidiki capsules.
• Air ndiye chete kuonana zvinhu pamwe upfu; hapana pakusvibiswa.
• kushandisika Kamudzira anoshongwa pashure kuparadzana.
• zvakakunakira ishande, nzvimbo uye kuramba.
CS Model Technical Magadzirirwo
500caps / Maminitsi
700caps / Maminitsi
3000caps / Maminitsi
1000caps / Maminitsi
5000caps / Maminitsi
000 #, 00 #, 0 #, 0el, 1 #, 2 #, 3 #, 4 #, 5 # nezvimwe capsules zvakaoma
Vakazadzwa Kamudzira Zvisina Kumira
How To Dambudziko Zvakaipa Capsules
How To Zarura Capsules
Material wokuwanazve Machine
Pharmaceutical Kamudzira Solution Provider
Suzhou denderedzwa rechiedza Pharmatech Co., Ltd
Takaita akavaka richikurukura vamiririri munyika dzakawanda kubatsira vatengi nyore. For kubvunza pamusoro zvinhu zvedu kana pricelist, ndapota siya email nesu uye isu tichava nekuonana mumaawa 24.